Ogaden News Agency (ONA) – Dawlada Soomaaliya & ururka ONLF oo Casmara Ku kulmaya.
Dawlada Soomaaliya & ururka ONLF oo Casmara Ku kulmaya.
Waxaa wadanka Eritrea Booqasho sadex cisho ah kujooga wafdi uu hogaamin hayo madaxwaynaha soomaaliya Mohamed Abdulahi farmaajo waxayna booqashadani daba socotaa isbadaladii bariga africa gaar ahaan Itoobiya kadhacay oo samayn wayn kuyeeshay xidhiidhka wadamada geeska africa lalahaayeen dalka Eritrea.
Hadaba wasirka warfafinta Somaliya oo waraysi siiyay idaacada voasomali ayaa sheegay in wafdiga Soomaaliya ay lakulmayaan masuuliyiinta Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya onlf ee kusugan dalka Eritrea,ayna diyaar uyihiin in waxii dhacay laga wada hadlo midnimada dadka soomaliyeed ee walaalaha ahna laga wada shaqeeyo.
Dowlada Soomaaliya ayaa horay gumaysiga Itoobiya waxay ugu wareejisay naftii hure cabdikariim sheekh muuse qalbi dhagax sidookalana ururka onlf kutilmaantay urur argagixiso ah oo al Shabab xidhidh la leh,inkastuu barlamaanka Soomaliya goaankaas waxba kamajiraan kutilmaamay hadana wali xukuumada soomaaliya ayaan Wali go,aankaas kanoqon raaligalina kabixin.